Kusvirisa kwakuita VAKADZI vemazuva ano ivo vakaroorwa!!! – Makuhwa.co.zw
Kusvirisa kwakuita VAKADZI vemazuva ano ivo vakaroorwa!!!
Mazuvano vanhu vakuroorana vari vana vadiki vasati vatamba nyika. Vakadzi vakutiza varume vavo vachienda kuno testa dzimwe mboro kunze uko.
Mukadzi haakanganwe mboro yakamubvisa virginity chero ukamusvira zvakadii anotombo kuyenzanisa comparing u ne first mboro yakamusvira first
Ukangoona mukadzi wako aakuti murume uyu ishamwari yangu this is her best way to confess kuti ndiri kumbosvirwawo hangu ne murume uyu. Vanhu vatema havagone kuita ma friends e opposite s ex pakasasviranwa.
Mukadzi akambogara kana kukurira kumusha kwawo ukaona ongoti teki teki kudzokera kunoona vabereki wake zvifanha zvaimbosvira kumusha ikoko before zviri kuramba zvichimuti dzoka dzoka
Mukadzi anoshora murume wake pavanhu kutsvakawo kuda kunzwa kuti ane mboro yaangazame magwana ndeupi.
Kusvirwa kwandakaitwa nemuzvambarara wemboro taenda kuSeminar
Kubatwa ndichisvira Mai vepaNext Door murume wavo arikubasa
Akandiratidza munda wemagaro and ndakabva ndaziva kuti apa NDASVIRA